हृदयाघातको उच्च जोखिम हुन्छ यी व्यक्तिलाई , तर कसरी बच्ने ? | सुदुरपश्चिम खबर
हृदयाघातको उच्च जोखिम हुन्छ यी व्यक्तिलाई , तर कसरी बच्ने ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ १३, २०७८ 13
अहिले धेरैलाई उच्च रक्तचाप छ, मोटोपन छ, कोलेस्ट्रोलको समस्या छ। यी समस्याहरूले हृदयाघातको जोखिम बढाएको छ।
त्यसैपनि जाडो मौसम मुटु रोगीका लागि अनुकूल मानिँदैन । बाह्य चिसोको कारण नसाहरु खुम्चने वा साँघुरिने हुन्छ । यसले रक्तप्रवाहमा कठिनाइ ल्याउँछ । जसको सोझो भार, मुटुमाथि पर्छ । यस्ता अनेक कारण छन्, जसले जाडोमा हृदयघातको जोखिम बढाउँछ।
रक्तनलीमा बोसो जमेमा
रक्तचाप बढेर मुटुमा असर परेमा
सामान्यत के मानिन्छ भने छातीमा तीब्र दुखाइ हुनु नै हृदयघातको संकेत हो। यद्यपि यति मात्र हृदयघातको संकेत होइन। हृदयघात हुनुअघि नै छालामा केही अरू संकेत देखापर्छ, जसलाई पहिचान गरेर हामी सर्तक रहन सक्छौं।
मुटुको स्वास्थ्य गडबड भएपछि छालामा अनेक किसिमका संकेत देखिन थाल्छ। उक्त संकेतलाई पहिचान गरेर बेलामै सर्तक रहेपछि सम्भावित खतराबाट बच्न सकिन्छ।
शरीरको अचानक जुनसुकै भागमा स–साना बिबिरा आउँछ भने यसबाट बुझ्न सकिन्छ तपाईंमा हृदय रोग छ। यस्तो बिबिरा शरीरमा कोलेस्ट्रोलको स्तर बढेपछि देखिन्छ। त्यसैले अचानक देखिने यस्ता बिबिरापछि केही सावधान भने रहनुपर्छ।
दुवै आँखाको छेउमा सेतो–पहेँलो चिप्रा जस्तो देखिन्छ। कसै–कसैमा यो चिप्रा जमेको मैन बत्ती जस्तै पनि देखिन्छ। आँखाका साथै यस्तो चिप्रा हात र खुट्टामा पनि देखापर्न सक्छ। यदि तपाईंमा यस्तो संकेत देखिए तपाईंको कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण भएको छैन। यसले कुनैपनि बेला हृदयघातको जोखिम निम्त्याउँछ।
अचानक तपाईंको औंलामुनि नीलो वा बैजनी रंगको निसाना देखियो भने सावधान रहनुहोस् । यसले पनि हृदय रोगको संकेत गर्छ। हुन त यस्तो निसान चोटको कारण पनि देखापर्न सक्छ। यद्यपि कुनै चोटपटक लागेको छैन भने तुरुन्तै चिकित्सककहाँ पुग्नुपर्छ।
यदि तपाईंको हात वा खुट्टाको औंलामा स–साना घाउखटिरा जस्तो देखिन्छ र यो दुख्ने किसिमको छ भने यसले पनि हृदय रोगको संकेत गर्छ। नयाँ पुस्ता बाट सभार